30 Askari oo lagu dilay Weerar ballaaran oo ka dhacay Maali. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
30 Askari oo lagu dilay Weerar ballaaran oo ka dhacay Maali.
On Mar 22, 2020 424 0
meydadka qaar kamid ah askarta Maali ee lagu dilay weerarka.
Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa qaaday weerar culus oo ay cagta ku marisay ciidamo katirsan xukuumadda Maali, kuwaas oo ku sugnaa saldhig milliteri oo ku yaala duleedka magaalada Tarankat ee hoostaga Gaaw.
Weerarka oo ahaa mid si wanaagsan loo qorsheeyay ayaa cagta lagu mariyay ciidamada xukuumadda Maali ee joogay saldhiga Tarankat, waxaana goobta lagu dilay ugu yaraan 30 askari oo katirsan xukuumadda Maali.
Marka laga soo tago khasaaraha dhimashada iyo dhaawacaba leh ee gaaray ciidamada xukuumadda Maali, waxay Nusratul Islaam wal Muslimiin kusoo furatay weerarkan saanado hub ah oo kala duwan, kuwaas oo ay kamid yihiin 7 gaari oo ay ku rakibanyihiin qoriyaasha Dhashiikhaha.
War Saxaafadeed kasoo baxay mu’assasada warbaahineed ee Az-Zallaaqa oo ku hadasha afka Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkan ay qaadeen Mujaahidiinta uu qeyb ka yahay howlgallada lagu doonayo in Maali looga xureeyo ciidamada Shisheeyaha Faransiiska.
Bayaanka waxaa farriin gaar ah loogu diray madaxweynaha xukuumadda Maali, kaas oo loogu baaqay inuu si degan u akhristo bayaanka ay soo saareen Mujaahidiinta, waxna aaney usoo kordhin doonin tuugsiga uu tuugsanayo dowladaha Faransiiska iyo Maraykanka.
Mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sheegay iney sii wadi doonaan dagaalka Jihaadka ah, inta ay ka xureynayaan Maali, oo ay ka baxayaan ciidamada Shisheeyaha, sidaba uu Maraykanka uga baxayo wadanka Afqaanistaan oo uu ku duuley sanadkii 2001-da.
Weerarkan oo dhacay maalinnimadii Jimcaha ayaa xukuumadda Maali waxay ku qiratay inuu khasaare kasoo gaaray, haseyeeshe waxay ka been sheegtay tirada rasmiga ah, waxaana markale weerarkan banaanka soo dhigayaa awooda Nusratul Islaam wal Muslimiin.